म्याग्दीमा बाढीपहिरोपछि–निरन्तरको झरीबादलले शिशुलाई फेर्न न्यानो कपडा छैन चिसो भुइँमा सुत्केरी र शिशु – Khabar PatrikaNp
म्याग्दीमा बाढीपहिरोपछि–निरन्तरको झरीबादलले शिशुलाई फेर्न न्यानो कपडा छैन चिसो भुइँमा सुत्केरी र शिशु
July 29, 2020 146
म्याग्दी — मराङको भिरालो पाखामा २५–३० घर झुरुप्प रहेको बस्ती हो राम्चे । पहिरोले नराम्ररी थलिएको यो बस्तीलाई अहिले शोकसँगै भोक र रोगले पनि गाँज्न थालेको छ ।
लेकको ठाउँमा निरन्तरको झरीबादलले सुत्केरी, नवजात शिशु र वृद्धवृद्धालाई चिसोले सताएको छ । पहिरोमा पर्दा सविना घर्ती पिउरे १० दिन, हरिमाया घर्ती पिउरे ४० दिन र गिरु घर्ती पिउरे दुई महिना १० दिनकी सुत्केरी थिए ।
‘पहिरोको विपत्मा ज्यान जोगाएर भाग्यौं, केही झिक्न पाएनौं । सामुदायिक भवनमा ओत त लागेका छौं, हरको (शरीर) कपडा फेर्न पाएका छैनौं । शिशुलाई फेर्न न्यानो कपडा छैन । आफैंले लगाएको गुन्युको अर्को फेरले बेरेर सुताउँछु,’ सविनाले भनिन्, ‘न बस्ने घर रह्यो, न खाने अन्न छ । कस्तो बेला जन्मेछ, छोरो ।’
असार २६ गतेको बाढीपहिरोमा ९ सदस्य गुमाएको राम्चेमा अझै राज्यका निकाय र दाताको ध्यान पुगेको छैन । पहिरोमा परेकी एक युवतीको ६ महिनाको गर्भै खेर गयो । तीन दिनपछि हेलिकोप्टबाट उद्धार गरी पोखरा पुर्‍याए पनि डाक्टरले शल्यक्रिया गरी गर्भबाट मृत शिशु निकाले । २२ वर्षीया ती युवतीको ढाडको मुनिपट्टिको हाड भाँचिएकाले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
तीन जना सुत्केरीलाई धौलागिरि गाउँपालिका–६ राम्चेको सामुदायिक भवनमा राखिएको छ । पहिरोले विस्थापित करिब ५० परिवार राहतमा आएका पहेंला त्रिपालको ओत लागेर पाखोमा लस्करै बसेका छन् । ‘सुत्केरीहरूलाई सामुदायिक भवनमा राखेका छौं । बाँकी सबै बाहिर पाल टाँगेर बसेका छौं । निरन्तर झरीले जमिनले घाम देख्न नपाउँदा पालमुनिको भुइँ चिसो छ,’ गोरे सुनारले भने, ‘मेसमा संख्या ठूलो भएकाले दाउरा तथा पानी व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो । त्यसैले अहिले अलग–अलग बस्न थाल्यौं ।’
भौगोलिक रूपमा जिल्लाकै दुर्गम मानिन्छ मराङ । राम्चे त्यहाँको पनि दुर्गम र अति कम उत्पादनशील भूगोल । दलितहरूको बाहुल्य रहेको यो बस्तीमा विकास कहिल्यै पुगेन । न त पहिरोपछि उद्धारकर्ता पुगे । क्षतिको विवरण संकलन गर्न प्रहरीसम्म पुगेन । एक–दुई खेप आएको २०–३० बोरा चामल सकिँदै गएको छ । सुत्केरी र नवजात शिशुले पौष्टिक आहार पाएका छैनन् ।
‘पुरिएका केही भाँडाबर्तन निकाल्यौं । तर लगाउने लत्ताकपडा हिलोमा गाडिएकाले निकाल्न मिलेन,’ अर्की सुत्केरी हरिमायाले भनिन्, ‘पोसिलो खाना नहुँदा दूध सुक्न थाल्यो, बच्चा भोकले रुन्छ ।’ सुत्केरीहरू आफन्तले दिएका जडौरी लगाएर बसेका छन् । पहिरोले वल्लो–पल्लो बस्तीसँग सम्पर्कविच्छेद भएको छ । दुई साता बित्दा गोरेटो बाटोसमेत खुलाइएको छैन । तत्काल बजार पुग्न पनि सम्भव छैन ।
बाटो नभएकैले सदरमुकाममा थुप्रिएको राहत गाउँ पुर्‍याउन सकिएको छैन । पहुँचमा रहेका अन्य बस्तीकाले भने राहत पाइरहेकै छन् । ‘हेलिकोप्टर उडेको देखिन्छ । क–कसले कहाँ राहत दिए हामीलाई जानकारी छैन । हाम्रो रोहवरमा आएका राहत मापदण्ड बनाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरेका छौं । नपुग्दा छिमेकीसँग बाँडेर खाएका छौं,’ वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले भने, ‘पहिरो प्रभावित तथा क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा दिएका छौं ।’
धान नफल्ने राम्चेका प्रायः सबैको २–३ मुरी मकै र ३–५ मुरी कोदो फल्ने बारी छ । अलिअलि आलु पनि रोप्छन् । अधिकांशको जीवन कृषिबाटै धानिएको छ । केही वर्षदेखि स्थानीय युवा वैदेशिक रोजगारीमा पनि जान थालेका छन् । ‘आकाशमा हेलिकोप्टर घुम्छन्, वल्लो–पल्लो बस्तीमा राहत बाँड्छन्, जान्छन् । हामी दलितको बस्तीमा न हिजो कोही नेता आए न आज,’ पहेंलो पालमुनि बसिरहेका गंगालाल विकले थपे, ‘सबैको अवस्था उही हो ।’
असारयता बाढीपहिरोमा परी जिल्लामा ३१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ५ जना बेपत्ता छन् ।
Prevउपत्यकाबाहिर भएका विद्यार्थी भन्छन्, ‘घरबेटीले घरभित्र नछिराए कहाँ गएर परीक्षाको तयारी गर्ने ?’
Nextवीरगन्ज कारागारका ६ कैदीसहित थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध नेकपाकै नेताहरु र प्रतिपक्ष दल उभिए, कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा प्रचण्ड र माधव नेपाल
बिक्रम सुनारकी श्रीमति मनु अकस्मात बेहोस भएपछि अस्पतालमा,बिक्रम भावुक हुदै भने ….म मरे जस्तै भए-भिडियो हेर्नुहोस
चाहेको सबै पूरा हुनेछ, जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस्!
नाग देबको स्वरुप भएको रुद्राक्षलाई ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस ७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33890)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32030)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29057)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21218)